Wolfwalkers (2020) – Gold Channel Movies
Video Sources 2365 Views Report Error
ဒီကားဟာ အလွန်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ကြည့်ရှုသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာ Heart-Warming ဖြစ်စေတဲ့ကားလေးပါ။ဒီထဲမှာ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေရဲ့သံယောဇဥ်နဲ့ လူ့အတ္တတွေ အကြောင်းကိုပေါ်လွင်စွာရိုက်ကူးထားပါတယ်။
တစ်ရက်မှာ ‘Robyn Goodfellowe’နဲ့ သူမအဖေ ‘Bill Goodfellow’ဟာ ဝံပုလွေအုပ်ကိုကူညီဖြေရှင်းဖို့ ‘Kilkenny,Ireland’ သို့ပြောင်းရွှေ့လာကြပါတယ်။
Robyn ဟာအမဲလိုက်မုဆိုးအလွန်ဖြစ်ချင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒူးလေးပစ်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ပါတယ်…..သူမရဲ့ သိန်းငှက်ငယ်လေး’Merlyn’အတူတူပေါ့။
ဝံပုလွေလူသားမလေးဖြစ်သူ ‘Mebh Óg MacTíre’ဟာ အိပ်ပျော်နေချိန်ဝံပုလွေဖြစ်ပြီး နိုးကြားနေချိန်မှာတော့ ဝံပုလွေလူသားမလေးပေါ့။ဝံပုလွေလူသားများဟာ ဒဏ်ရာတွေကိုကုသနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
တစ်ရက် တောထဲကိုယောင်လည်လည်နဲ့ရောက်လာသူ’Robyn’ကို ‘Mebh’ဟာစနောက်ကိုက်ခဲခဲ့ပြီး ပြန်လည်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာသူတို့နှစ်ဦးသူငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ… ဝံပုလွေတွေကိုသုတ်သင်ဖို့ တာဝန်ပေးခံထားရသူ Robyn’အဖေကရော သူ့သမီးငယ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဝံပုလွေလူသားမလေးကို ဘာဆက်လုပ်မလဲ? Kilkennyမြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်သူကရော ဘာတွေဆက်လုပ်မှာလဲ? ဒီရှုစားသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုထိစေတဲ့ ဒီကားလေးကို GC မှာ ကြည့်ရှုလို့ရပါပြီဗျာ။
Size – 900MB / 410MB
Genres – Animation, Adventure, Family
Run Time – 1 Hr 43 mins
IMDb Rating 8.3 2,029 votes
TMDb Rating 8.8 28 votes
Download Userdrive SD Myanmar 390MB
LuluDecember 18, 2020Reply
Link ကို mega, mega up, yoteshine နဲ့လုပ်ပေးပါ
MmMarch 11, 2021Reply